Otú nyefee Ndi ana-akpo si gam akporo ka Android Mfe
Otú nyefee Ndi ana-akpo si gam akporo ka Android ekwentị mkpanaaka na Mfe
Otú nyefee Ndi ana-akpo Site na otu na ekwentị ọzọ
Nyefee kọntaktị site na otu ekwentị ọzọ adịghị ga-abụ ike. Na nri atụmatụ na nri ngwaọrụ, ị na-adịghị ka nchegbu banyere otú nyefee cotnacts ọhụrụ ekwentị. Ihe bụ nsogbu bụ na e nwere nnọọ ọtụtụ Nkuzi na ụzọ ziri ezi isi nyefee kọntaktị, ọ bụ nnọọ mfe ọ ga-efu. N'ebe a, anyị ga-atụle ụzọ dị iche iche nyefee kọntaktị site na gị iPhone na Android, transfer kọntaktị site na Android ka iPhone na nyefee kọntaktị site na Android ka Android. Ka anya na otú ị pụrụ isi nyefee kọntaktị n'etiti ndị a igwe nnọọ mfe.
Nkebi nke 1: Nyefee Ndi ana-akpo si iPhone ka Android
Nkebi nke 2: TransferContacts si gam akporo ka iPhone
Part 3. Nyefee Ndi ana-akpo si gam akporo ka Android
Part 4. Olee nyefee Ndi ana-akpo si na ngwaọrụ ndị ọzọ na-Android ma ọ bụ iPhone
Part 1. Nyefee Ndi ana-akpo si iPhone ka Android
Ihe kacha ụzọ nyefee Android kọntaktị ga-eji ihe allmighty desktọọpụ ngwa na-bụ nnọọ mfe aka na ike mfe gị niile mgbu. Wondershare MobileTrans Ga-dị ebube otú ahụ ngwá ọrụ. Ọ nwere ike na effortlessly nyefee gị kọntaktị n'etiti dị iche iche Android igwe ma ọ bụ iPhones na otu click ozugbo i nwere ma nke gị ntị plugged n'ime kọmputa. Ke adianade do, Wondershare MobileTrans-enyere gị aka nyefee gị Android kọntaktị na kọmputa na mgbe ị na-enwe na ekwentị ọzọ, ị nwere ike iweghachi gị Android kọntaktị mfe.
Nzọụkwụ mbụ mgbe ị chọrọ nyefee gị kọntaktị site na gị iPhone na Android bụ ndabere gị kọntaktsị na iCloud. Nke a bụ nnọọ mfe, na-aga iCloud na nbanye akaụntụ gị.
Ozugbo bịanyere aka na click on ana-akpo. Ị ga-ahụ na kọntaktị na e kwadoo na iCloud. Ihe dị ka nke a.
Ị ga na họrọ kọntaktị niile site na ịpị CTRL + A. wee pịa na ntọala Button na ala n'akụkụ aka ekpe wee họrọ "Export vCard".
Ị ga-ahụ mkpa abanye na gị Gmail akaụntụ. Ozugbo i ọma ite ke na pịa "bubata kọntaktị" na-ahọrọ exported vCard na pịa ibubata niile. All gị faịlụ ga-dị ka gị Google ana-akpo.
Ọ dị mkpa na ị jikota niile kọntaktị na na-duplicated tupu Iweghachi ha na gị na Android ngwaọrụ. Ozugbo gị kọntaktị na ndepụta e kpochara na n'ụzọ kwesịrị ekwesị merged, ọ bụ oge iji weghachi kọntaktị gị android ngwaọrụ.
Na gị android ngwaọrụ aga NchNhr mgbe ahụ Ntọala na Akaụntụ na mmekọrịta. Pịa na Add akaụntụ wee Họrọ Google.
Banye na gị Google akaụntụ. Ozugbo bịanyere aka na ị nwere ike ugbu a dị nnọọ tinye akara n'igbe na-ekwu, "mmekọrịta Kpọtụrụ" wee enweta na rụchaa. Ọ ga-ele anya ihe dị ka nke a.
Ekele, i nwere ugbu a kpọfere gị niile kọntaktị site na gị iPhone gị Android Ngwaọrụ.
Nyefee ozi site na iPhone ka iPhone
Part 2. Nyefee Ndi ana-akpo si gam akporo ka iPhone
Ọ bụrụ na ị dị nnọọ zụtara a ọhụrụ iPhone na ị chọrọ nyefee gị kọntaktị site na gị gam akporo ngwaọrụ gị iPhone, ebe a bụ otú ime nke a n'ụzọ dị mfe.
Ị ga-mkpa nwere Gmail akaụntụ. Ọ bụrụ na ị na-adịghị otu onye, ​​edebanye ga-naanị nkeji ole na ole. Ozugbo i nwere a Gmail akaụntụ, ebe a bụ ihe ị chọrọ ime.
Na gị android ngwaọrụ emeghe na kọntaktị na pịa na menu bọtịnụ. Ebe a, họrọ jikota na Google mbubata gị kọntaktị na Google.
Ị ga-ahụ gị kọntaktsị na Google. Wepụta oge hazie na kọntaktị na ihichapụ ọ bụla duplicates. Ọ bụ ugbu a oge ịkpali ọhụrụ kọntaktị ọhụrụ gị iPhone.
Na iPhone, ịhọrọ ntọala na mgbe ahụ Mail, Ndi ana-akpo, kalenda. Ọ ga-ele anya ihe dị ka nke a.
Tinye gị Gmail akaụntụ na-esote ihuenyo na niile Ndi ana-akpo na gị Google akaụntụ ga-akpaghị aka dị n'ime gị iPhone.
Ọ bụ na mfe.
Nyefee kọntaktị site na Anroid ka Android dị mfe. Na ọtụtụ ikpe kọntaktị gị ga-akpaghị aka synced mgbe mbụ ị gbanye ọhụrụ gị Android ekwentị. Nke a bụ na contingency ị bịanyere aka na gị Google akaụntụ gị android ngwaọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-apụghị ịhụ kọntaktị gị na gị na Google kọntaktị, ebe a bụ otú mmekọrịta gị na kọntaktị gị Gmail akaụntụ ekwentị gị.
• Gbaa mbọ hụ na Gmail arụnyere na ekwentị gị
• Na App Igbe, na-aga ntọala na mgbe ahụ enweta on "Accounts na mmekọrịta"
• Gbaa mbọ hụ na Accounts na syncing ọrụ na-nyeere
• On gị akaụntụ email melite họrọ Gmail na na na na i nyeere mmekọrịta Ndi ana-akpo nhọrọ
• Pịa mmekọrịta ugbu a na kọntaktị gị ga-synchronized na gị Gmail akaụntụ
Nyefee kọntaktị site na gị Android ka iPhone ma ọ bụ Android ka Android dị mfe. Nsogbu na-abịa na mgbe ị chọrọ nyefee data site na ndị ọzọ ntị ka iPhone ma ọ bụ Android. Ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe nsogbu mgbe na-agbalị nyefee data si sịnụ a Blackberry ma ọ bụ Nokia ka ihe gam akporo ngwaọrụ ma ọ bụ onye iPhone.
Wondershare MobileTrans Kwesịrị gị Software nke oke ma ọ bụrụ na ị na-achọ nyefee kọntaktị, ozi ederede, oku na ndekọ, kalenda, photos, music, video na ngwa site otu ekwentị ọzọ. Mma nke iji Wondershare MobileTrans bụ na ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ dị mfe. Ịnwere ike ịnyefe niile nke gị data na otu Pịa.
The ụzọ ndị ọzọ anyị tụlere n'elu nwere ike inyere gị nyefee kọntaktị ma ọ bụghị ndị ọzọ data. Wondershare MobileTrans Ga-enyere gị na-niile data ị chọrọ n'aka ọ bụla ekwentị ọzọ nile na otu click.
Nyefee bụghị nanị Ndi ana-akpo
E wezụga kọntaktị, ị nwere ike nyefee ngwa, ozi, photos, music, video, kalenda, na oku na ndekọ.
Wepụ Kpọtụrụ ndabere
Ọ na-enyere gị aka wepụ backups mere site Kies, iCloud, iTunes na blackberry Desktọpụ Suite na nyefee kọntaktị gị Android.
Nkwado 3000+ Devices
100% dakọtara na ihe karịrị mmadụ 3,000 Android ntị na mbadamba emepụta site Samsung, HTC, Motorola, LG, Sony, Huawei, ZTE na ndị ọzọ.
Jikwaa gị Android
Ị nwere ike iji MobileTrans jikwaa data na gị Android ngwaọrụ dị ka bupu data gị Android na kọmputa dị ka a ndabere.
Ọzọ Isiokwu banyere Android Nyefee
Nyefee Data si iPhone ka Android
Bugharịa Data si gam akporo ka Android
Nyefee Nokia Ndi ana-akpo ka Samsung Galaxy S3 / S4 / S5 / S6 // Cheta 4
Nyefee ngwa site Android
Otú nyefee Ndi ana-akpo, Photos, SMS, Music na Video si Nokia ka Android
Olee otú Naghachi ehichapụ Photos si Motorola Droid Bionic
Otú nyefee Spotify Music ka Google Music Library
Mfe Import Vcard (.vcf) na Android
> Resource> Android> otú nyefee Ndi ana-akpo si gam akporo ka Android ekwentị mkpanaaka na Mfe